ညီလေးအတွက် ရေးတဲ့ကဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ညီလေးအတွက် ရေးတဲ့ကဗျာ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Sep 13, 2012 in Creative Writing, Poetry | 31 comments
ငါ မသိဘူး …
လျော့ကျသွားသလိုပဲ ငါခံစားလိုက်တယ် …
ဒီအတွက် စိတ်မကောင်းဘူး ညီလေး …..။
မင်း အသက်က ၁၇၊ ၁၈
မင်းဆော်ကလည်း ၁၇၊ ၁၈
မင်းတို့ ဘဝကို ဘယ်လို ထုဆစ်ကြမလဲ …?
ငါ မမေးဘူး ညီလေး ..
ငါ မမေးဘူး …
မင်းပဲ ပြန်ပေးဆပ်တော့ …
ငါ ပြောချင်တာက တစ်ခုတည်းပဲ
မင်း မိဘကို အပူမကပ်ပါနဲ့ …..။
ငါ ဖုန်းဆက်တော့ မင်းက ပြောတယ်
စောင်တောင် မရှိသေးဘူး … ဆိုပဲ
မပြောပလောက်တဲ့ ကိစ္စလေး ရှိပါသေးတယ် ညီလေး ..
ဒီထက် မက ….
အများကြီး လာဦးမှာပါ …
ငါ ကျိန်ပြောရဲတယ် ညီလေး …
အဲ့ဒီဒဏ်တွေ မင်း ခံနိုင်ဖို့အတွက်
မင်း အားမွေးတတ်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ် ညီလေး …..။
အကိုကြီးတော့ အဖရာ ဆိုပေမယ့်
အိမ်မှာ ငါတို့ အဖေက ငုတ်တုတ်ကြီး ရှိသေးတယ် …
ဒါကြောင့် အကိုကြီးဟာ အကိုကြီးပဲ ညီလေး …
ညီတစ်ယောက်အပေါ် ထားရမယ့် တာဝန်
ငါ ကျေချင်ပေမယ့် …
ငါ အတွေးထဲ သိုဝှက်ထားခဲ့ပေမယ့် …
ခုတော့ ဒါတွေကို ရေစုန်မှာမျှောလိုက်ပြီ ညီလေး …
မင်းက အချိန် မတိုင်ခင် ပျံသွားခဲ့တာကိုး
မင်း သိအောင် ပြောလိုက်ဦးမယ် ညီလေး …
မင်းဟာ ဆိုင်သူပဲ ..
ပိုင်သူ မဟုတ်တော့ဘူး …..။
သြဘာသံတွေ ညံလာမှာပဲ ….
ဖရိုဖရဲနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်သွားတဲ့
ဟာသဆန်တဲ့ လှောင်ပြောင်မှုတွေ လာမှာပဲ …
ဒါ ဓမ္မတာပဲ ညီလေး …
မင်းပဲ ဖြောင့်အောင် လျောက်ရမှာ …
မင်း ကတဲ့ ဇာတ် …
မင်းပဲ နိုင်အောင် ကရမှာ …
ဒါလေး မှတ်ထားပါ ညီလေး …..။
အဖေ ခဏခဏ ဆုံးမဖူးတဲ့ စကား
မင်း မှတ်မိဦးမလား မသိဘူး …
ငါ့ ခြင်ထောင်ထဲ ထည့်ထားလိုက်မှာ … ဆိုတာလေ
ဒါဟာ ဟာသဆန်ဆန် ဖြစ်ပေမယ့်
ဆုံးမလိုက်တဲ့ စကားပဲ ညီလေး …
ငါကတော့ ဒီစကားကို ခေါင်းထဲ ရိုက်ထည့်ထားတယ် …
မင်းကတော့ မေ့ချင်ယောင် ဆောင်ခဲ့တယ် …
ဒီအတွက် မင်း ခံရလိမ့်မယ် …..။
မင်း မိန်းမ ရှာတာ
ငါ အပြစ်တော့ မပြောလိုပါဘူး …
ဒါဟာ အများစု လျောက်လှမ်းနေတဲ့ လမ်းပဲ
ဒါပေမယ့် ညီလေး …
မင်း အဖြစ်က စောလွန်းနေသေးတယ် …
ဒါပေမယ့် ညီလေး …
မင်း အဖြစ်က လွန်ခဲ့ပြီ …
မင်း အဖြစ်က အိမ်ထောင်သည်ဘဝကို ရောက်ခဲ့ပြီ …..။
မင်း သတင်းကို ကြားရကတည်းက
အကို တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ကို
ဖြစ်သွားတဲ့ ငါ ….
မျှော်လင့် ထားသမျှကို ခဝါချ
သူက ငါတို့ မပိုင်တော့ပါဘူး … လို့ဆိုတဲ့
အမေ့ရဲ့ တိုးလျလျ အသံနဲ့ ….
အေးလေ … ဖြစ်ပြီးတော့လည်း
ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ .. ဆိုတဲ့
အဖေ့ရဲ့ နှစ်သိမ့်တဲ့ အသံ …
မင်းအောက်က ညီမသုံးယောက်ရဲ့ အသံ
အစောဆုံး ထွက်ခွာသွားတဲ့ မင်းအတွက်
တိုးတိုးလျလျသာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ် …
ဒါက မင်းသိအောင်ပါ ညီလေး …..။
မင်းရဲ့ သီးခြား ကမ္ဘာငယ်အတွက်
မင်း လှပအောင် ထုဆစ် ..
မင်းရဲ့ သီးခြား ဘဝလေးအတွက်
မင်း ရှုချင့်စရာ ဖြစ်အောင် ထုဆစ် …
နားလည်မှု ရှိနေအောင် ကြိုးစား
မင်းတို့ရဲ့ အနာဂါတ် လှေကားများမှာ
မြင်ချင်တယ် ညီလေး …..။
ဆရာအောင်ဝေး ဆဲသလို ဆဲပစ်လိုက်မယ်
ညီလေး မင်းကို ရီးပဲ ဟေ့ကောင် …..။
မင်းရဲ့ အကို မဟုတ် တဟုတ်
အဖေ့ရဲ့ နှစ်သိမ့်တဲ့ အသံ … ဒီစာကြောင်းလေးဖတ်ပြီး.. သားသမီးအပေါ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိကြတဲ့..မျှော်လင့်ချက်ထားတဲ့ မိဘတွေရဲ့မေတ္တာ၊ ဖြစ်စေချင်တိုင်းလည်း မဖြစ်, မဖြစ်စေချင်တာကိုလည်း မတားဆီးနိုင်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ အဖြစ်ကို ခံစားမိပြီး မျက်ရည်ဝဲရပါတယ်။
တစ်ရှူးလေး ကမ်းပါရစေဗျာ ..
ခုလို ခံစား ဖတ်ရှုသွားတဲ့ linnlinn ကို ကျေးဇူးပါလို့ ..
ပညာက မစုံသေးဘူး ..
ကြင်ယာက စုံသွားပြီဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာ ..
တော်တော် အသုံး …
ခုလို ကျနော့်ရဲ့ ကဗျာကို အားပေးသွားတဲ့
ဦးကြီးမိုက်ကို ကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်လို့ …
တိုရီးက အဲလို တွက်ချက်နေလို့ခုလို လပြိုဂျီး ဖြစ်နေတာ..
ညေးကတော့ အေးချေး ခေးမွေးပဲ.ညှင်း..ညှင်း..
အပျိုရီး လပြိုဂျီးတွေ ပိုပေါလာအောင် ခုလို ဘာမသိညာမသိ လျှောက်ရေးနေတဲ့ တိုရီးကိုလဲ ရီးပဲဂျာ..
ဟော့ဒီမှာဗျို့ သူကြီးရေ စိန်ဗိုက်ဆဲနေတယ်
သူငယ်အံရေ သူ့ဘ၀ သူ့အကြောင်းပေါ့ဟယ်။ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ ။ တချို့တွေလည်း ပျိုတကံ အိုတကံ ဆိုပြီး အိမ်ထောင်ကျမှ တွန်းအားကြောင့် ဘ၀ကို ထူထောင်နိုင်တာတွေ အများကြီးပါ။ လူတိုင်း မွေးကတည်းက လက်ဗလာနဲ့ လာခဲ့ကြတာမလား။
ဘာတဲ့ ဘီလ်ဂိတ်ပြောတာလေး ဆင်းဆင်းရဲရဲ မွေးလာတာ မင်းအပြစ် မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ဆင်းဆင်းရဲရဲ သေသွားရင်သာ မင်းအပြစ်တဲ့
ဆိုတော့ အသက်ရှင်နေသမျှ ကိုယ့်မှာ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ကြိုးစားဖို့ပဲ လိုတာပါ။
ငါက မယူချင်လို့ မယူသေးတာကွ .. ညှင်းညှင်း ..
(ဂယ်ဒေါ့ အိမ်က ပေးစားဒါဘဲ စောင့်နေရဒဲ့ ဘဝမို့ .. အဟီး .. ဟင့် .. ရွှတ် .. ငါ့ နှပ်ချေးဖတ် စိန်ဗိုက် နဖူးမှာကပ် …)
နင်ဂဒေါ့ သိမှာ ဟုတ်ဘူး ..
ဟိုဂျီးဒေါ် Wow ရဲ့ ပို့စ်မှာ နာဂ နင့်ကို ချဲပီးတား .. ကွိကွိ ..
ဒီတော့ ကျေပီ …
သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခုခု ဖြစ်သွားမှာကိုပါပဲ ..
အမပုခ်ျပြောသလို အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ တွန်းအားကြောင့်
ထူထောင်နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ …
ပြီးတော့ ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ စကားအတွက်လည်း ကျေးဇူးပါလို့ ….
တိုရီး… တိုရီးအံချာ… ညဲရေးစီစီကိုလည်း
တိုရီး ညဲမရေးရဲ့ .. ညဲလေးတစ်ယောက်လို သဘောထားပီး
ဆုံးမဘေးဘာ… အတိုကြီးတော်ချင်ရို့ဘာ.. တိုရီး..
တိုရွီးရဲ့ မေတ္တာတွေကို ညဲရေးတိလို့
အနော့်ရဲ့ ညီမငေးလေးဒွေဂလေ ..
ခုမှ နှပ်ချေးတွဲလောင်း သာသာလေးဒွေဘဲ
ရှိဒေးဒါ ခည …
ဦးအောင်ဝေးစရိုက်တွေပေါ်လာပါလား အမျိုးများ တော်နေသေးလားဟင်… ညီလေးအတွက်ဆိုပေမယ့်
ညီမလေးက မနေနိုင်လို့ ၀င်ရောက်ဖတ်မိပါတယ်။
တွေ့ရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်လို့ ပြောတာ…
အဟမ်း .. ဟမ်းဟမ်း ..
ဂျီးဒေါ် တကယ်ပြောတာနော် ..
တွေ့မှ ထွက်မပြေးနဲ့ ..
အစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ. စိတ်သဘောထားနဲ. ဂရုနာဒေါသ တွေပေါ့ဗျာ…. အင်း အဲလို ကိုယ့်ညီလေး ဘာမှ မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာ အဲလိုဖြစ်သွားတော့ နှမျောရှာမှာပေါ့… ဒါပေမယ့်လဲလေ ဖြစ်ပြီးမှတော့လဲ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ…..
ကျွန်တော်အမေ ပြောဘူးတယ်… ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်တဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံပဲတဲ့ အမေတို.ကတော့ တတ်နိုင်သလောက် ဖေးမရမှာ အမေတို.တာဝန်ပဲတဲ့…………. အဓိပ္ပာယ်က အများကြီးနော်…….
ခုလို ခံစား အားပေးသွားတဲ့အတွက်
ဦးရွှေတိုက်ကို ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်လို့ ..
ဦးရွှေတိုက်ရဲ့ အမေ ပြောဘူးတဲ့ စကားတွေကလည်း
မှတ်သားစရာတွေ ပါပဲဗျာ …
စာသားတွေထဲက ခံစားချက်တွေ စေတနာတွေ ကို မြင်ရတော့
စနဲသီချင်းကိုတောင် ပြေးသတိရမိတယ် ရောင်းရင်းကြီးရယ်
ကျုပ်က သိဘူးရယ် .. အဟီးးး
ဘောပေါက်အောင် အဲ့သီချင်းကို ဆိုပြဘာဦး ..
ကြီးရင့် သွားတဲ့ အသက်တွက်
ရဲ နှစ်ခါသေတဲ့ 
ငွေ ယားဖေါ်လို့ ရတယ်
နှစ်လုံးထီဒိုင် ဆီသွားလို့ ရတယ်
သိပ်များ အားနေရင်တော့ 
ခုနှစ်ထောင်နဲ့ ပေါင်လိုက်တော့ 
ကျုပ်တို့ ကတော့ ခတ်မိုက်မိုက်ဘဲ ။
ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံနေချိန်မှာ
ရင်ထဲက ဒဏ်ရာဟာ လျော့ပါးနေတတ်တယ်တဲ့ …
ပီးဒေါ့ ဦးဆာမိဂျီး စပ်ထားတဲ့ ကဗျာက
ရေလည် လန်းတယ် …
ကျေးဇူးပါ ဦးဆာမိရေ …
ကျုပ် နှလုံးသားတော့ မပေါင်သေးဘူး ..
ခင်ဗျား ပို့စ်မှာတော့ တစ်ခုခု ပေါင်ဖို့ ပြောထားတယ် ….
ပို့စ်ရေးတဲ့ ကိုအံစာတုံး စာလဲ ကြိုက်တယ်
အောက်က ကောမန့်ပေးတဲ့ ကိုဆာမိ စာကိုလည်း ကြိုက်တယ် …။
ရင်နှစ် စာအစစ်တွေ ချရေးထားခဲ့သူတွေအတွက်..။
ညီလေးလို့ ရေးထားတာကို ညီမလေးလို့ ဖတ်မိပြီးဝင်ကြည့်မိသွားတာ ပြီးမှမှားမှန်းသိပြီးဘာပြောရမှန်းမသိတော့လို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ကိုကိုအံဇာဒုန်းရေ…။
ခုလို ကျနော့်ရဲ့ ကဗျာလေးကို အားပေးသွားတဲ့အတွက်
သဂျီး စိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင် ..
ပွိုင့်တွေ ပြန်တိုးပေးလိုက်ဗျာ ..
ဦးနေ တို့ကတော့ ဖြစ်ရမယ် …
ညီလေး ကို ညီမလေးလို့ မှားပြီး ဖတ်ရတယ်လို့ ..
ခုဟာက စာမို့ တော်ဒေးဒယ် ..
တကယ့် အပြင်မှာ အဲ့လို မှားလို့ကတော့ ..
ဖြစ်သွားတဲ့ ငါ ….။
ဆိုင်သာဆိုင်မပိုင်တော့တဲ့ ဘ၀မှာ အမေနဲ့အဖေကိုသနားမိသွားတယ် ရွှေကြည်တောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာ အမေတို့ဆိုဘယ်လိုနေမလဲပေါ့။
သူများက လုယူသွားသလိုပဲ …
ကျနော့်အတွက် ဒါဟာ ပထမဆုံး အကြိမ်ပါပဲ …
အရင်တုန်းက အိမ်ထောင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရီရီမောမော စနောက် နေခဲ့တာပဲ ..
ဘာမှ မခံစားခဲ့ရဘူး ..
တကယ့် လက်တွေ့လည်း ဖြစ်ရော …
သတင်း ကြားရုံနဲ့တင် စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး ဖြစ်သွားရတယ်ဗျာ …
၁၈/၁၇ ကတော့ အိမ်ထောင်ထူဖို့ စောလွန်းပါသေးတယ်။
အိမ်ထောင်နဲ့ ဘဝ ဟာ သာမာန်လူငယ်လေးတွေ အတွက် ဘယ်လောက် ရုန်းကန် ရသလဲ ဆိုတာ မသိကြဘူး။
အရီး တို့ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်း အဲဒီ အရွယ်မှာ မိန်းမခိုးသွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ နှစ်ဖက်မိဘ က ကြွယ်ဝတော့ အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ပြီး ကျွေးထားတော့ ကျောင်းပြီးသွားတယ်။
ကျောင်းမှာ သူများတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စာသင်နေချိန် သူ့ကို ကြည့်ရတာ နှောင်ကြိုးနဲ့မလွတ်လပ် သလို ဖြစ်နေတာမို့ သနား စိတ်ဝင်ခဲ့တယ်။
အခုမှာတော့ သတင်းကြားရတာ သူ့ကလေးတွေက ကျောင်းတွေပြီးလို့ အလုပ်တောင်လုပ်နေကြ သတဲ့။
ကိုယ့်မှာတော့ လူလွတ်ဘဝမှာ အပျော်လွန်ပြီး ခုမှ အိုကြီးအိုမ နဲ့ ကလေး ထိန်းနေရတဲ့ ဘဝ မို့
ငါ့ကလေး ကို ငါ့မြေး လို့များ ထင်ကြမလားလို့
တွေးရင်း တွေးရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားရင်း …..
တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ အိမ်ထောင်ပြုတာ ရေတို စီမံကိန်း အဖြစ်ကောင်းလား၊ ရေရှည် စီမံကိန်းက ကောင်းလား ဒွိဟပွါးနေဆဲ။
ဒီတော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ့်သဘော ဖင်မနိုင်ဘဲ ပဲကြီးဟင်း မစားရင်ပြီးရော။
အရာတိုင်းမှာ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး တွဲနေတာချည်းပါဘဲ။
ရွာထဲ မှာ မွေးနေ့ ကြေငြာပေါင်း များပြီ။
မင်္ဂလာဆောင် ကို တရားဝင် ဘယ်သူ ကြေငြာမလဲ။ သိချင်စမ်းရဲ့။
ဟို ခေါင်းဆယ်လုံး နဲ့ ဖားလိုလို မြွေလိုလို ဟာလေးကတော့ လေသံပစ်နေတာဘဲ။
တစ်ချို့လဲ ဒီလိုလဲ ကျိမ်းကျေ ကုန် ရော။ ;-)
ရွာသူ/သား အပေါင်းတို့ခင်ဗျား …
ကျွန်ုပ်ထွန်းပြောင်မှာ ဖိတ်စာတစ်ခြမ်း ရိုက်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း ………………
အကိုမဟုတ် တဟုတ် ..ကိုအံစာ..
ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော် ..
တရားဝင် ကြေညာမယ်ဂျ ..
ညီ မငေး တငေး
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါကွဲ့ ..
နော် .. ညီငေး …
ညီအကိုချင်း ချစ်တဲ့အချစ်မျိုးကို မဟာရာဇာကြီး ရေးပြတော့မှပဲ